श्यामसुन्दर पुडासैनी काठमाडाैं, ६ माघ
अघिल्लो साता तातेको ‘तँ प्रकरण’ अहिलेसम्म सेलाएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा तँ प्रकरणका दुई पात्र अर्थात् गायिका आस्था राउत र महिला प्रहरी रमिता श्रेष्ठको पक्ष र विपक्षमा तर्कवितर्क भइरहेको छ ।
आस्थाले फेसबुक लाइभमा आफू र प्रहरी संगठनप्रति अपमान हुनेगरी बोलेको भन्दै रमिताले उजुरी दिएकी छन् । उनको उजूरीका आधारमा गायिका आस्थामाथि ‘कठोर सजाय’ हुन सक्नेगरी स्थानीय प्रशासनले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि यो विषय थप पेचिलाे बनेकाे छ ।
आस्थाको फेसबुक लाइभ भिडियोकै आधारमा ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४' को दफा ११८ अनुसार कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रहरीले अनुमति पाइसकेको छ । कसुर पुष्टि भए १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।
प्रशासनले पक्राउ पुर्जी जारी गरेसँगै कानुनअनुसार राउत प्रहरीको फरार सूचीमा परेकी छन् । उजुरी परेको र प्रशासनले छानविन गर्न अनुमति दिइसकेकाले यो मुद्दा अब यत्तिकै सेलाउने सम्भावना देखिँदैन । उजुरी परेको कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा प्रहरीले आस्थालाई बोलाउनेछ वा उनी उपस्थित नभए पक्राउ गरेरै ल्याउनेछ ।
प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकप्रति विवाद भइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि राखेकै भरमा गायिका आस्था राउतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यसबाट सरकारले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रित गर्न खोजिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
विमानस्थलमा आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै आस्थाले जुन भिडियो सार्वजनिक गरिन्, त्यसमा उनको शैली सभ्य नभएको भनेर उनीमाथि कारबाही हुनुचाहिँ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोज्नु हो । यो घटनाबाट ‘अभद्र व्यवहार गर्न नहुने’ भन्ने कानुनको दुरुपयोग गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।
सार्वजनिक स्थानमा नागरिकले शासक, राज्यका निकाय र तिनका प्रतिनिधिसँग हाकाहाकी तर्कवितर्क गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हो । शासक तथा राज्यका निकाय र प्रतिनिधिसँग चर्को स्वरले बोल्नै नहुने, प्रश्न गर्नै नहुने, चित्त नबुझे प्रतिवाद गर्नै नमिल्ने, भन्ने लोकतन्त्रमा हुँदैन । किन यस्तो गरेको भनेको भरमा ठेगान लगाउन पक्राउ गरिहाल्ने ? जेल हालिहाल्ने ? यस्तो रवैयाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता के होला ?
आस्थाको गल्ती के हो ?
महिला प्रहरीको उजुरीपछि आस्था राउतलाई पक्रन प्रशासनसँग अनुमति लिने प्रहरी संगठनले आस्थामाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति चाहिँ एक्सन लिनु पर्दैन ? प्रहरीहरू जनताका सहयोगमा खटिएका हुन् कि अभद्र व्यहार गर्दै सास्ती दिन ?
आस्थाले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै गरेको टिप्पणी आक्रोशित शैलीमा थियो । उनी र प्रहरी दुवैको पक्षमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेकै बेलामा प्रहरीले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भिडियो फुटेजमा आस्थाले ज्याकेट खोलेर एक्स–रे मेसिनमा राखिदिएपछि उनको शरीर जाँच भएको देखिन्छ ।
जाँचपश्चात् आफ्नो सामान लिएर अघि बढ्ने क्रममा प्रहरीले आफूलाई अस्वाभाविक शैलीमा कफीको ग्लास लैजान भनेको आस्थाले बताएकी छन् । आरोपअनुसार त्यही क्रममा प्रहरीले आस्थाको ह्यान्ड ब्यागमै कफी खन्याइदिन खोजेको पनि देखिन्छ । सार्वजनिक भिडियोको ५८–६० सकेण्डतिर ध्यान दिएर हेर्ने हो भने प्रहरीले जबर्जस्ती गर्दा टेबलमा अलिकति कफी पोखिएको पनि देखिन्छ ।
सीसीटीभी फुटेज हेर्दा आस्थाको आरोप सत्य झैं लाग्छ तर आवाज नभएको सो फुटेजबाट अन्तिम निष्कर्ष भने निकाल्न सकिँदैन । भिडियो सार्वजनिक हुनुअघि आस्था विनाकारण त्यति धेरै आवेशमा आएकी पक्कै होइनन् भन्ने अनुमान मात्र थियो । भिडियो नै आइसकेपछि भने महिला प्रहरीले आफूमाथि अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्ने आस्थाको आरोप सत्यझैं देखिन्छ ।
महिला प्रहरीको उजुरीपछि आस्था राउतलाई पक्रन प्रशासनसँग अनुमति लिने प्रहरी संगठनले आस्थालाई गरिएको दुर्व्यवहारप्रतिचाहिँ एक्सन लिनु पर्दैन ? प्रहरीहरू जनताका सहयोगमा खटिएका हुन् कि अभद्र व्यवहार गर्दै सास्ती दिन ? विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा जाँज गर्नुपर्छ । आस्थाले पनि सुरक्षा जाँचका लागि सहयोग गरेकी छन् । तर, उनलाई जाँच गर्ने नाममा हात समातेर तानीतानी कफी व्यागमा खन्याइदिन खोज्नुचाहिँ सभ्यता हो ? जनताको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीमा धैर्यता र सहनशीलता हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
आरोपित महिला प्रहरी चोरको खुट्टा काट् भन्दा चोरले पहिल्यै खुट्टा उचाले झैं आफैं आस्थाविरुद्ध उजूरी दिन पुगेकी छन् । प्रहरी संगठनभित्र बोली व्यवहारको पुरानो समस्या हो । सामान्यतया विमानस्थलदेखि बसपार्कसम्म ड्यूटीमा रहेका प्रहरीहरूको व्यवहार अपवादबाहेक प्रायः रुखो नै हुन्छ । जनताको सेवा र सहयोगमा खटिएका प्रहरीले सर्वसाधारणसँग अमर्यादित बोली व्यवहार गर्न मिल्दैन । यस्तोमा ‘प्रहरी हाम्रो साथी’ भन्ने नारा कसरी पत्याउने ?
‘रिसको बेलामा कसैले वेद पढ्दैन’ भनेझैं २/४ वाक्य अशिष्ट थियो होला्, अस्थाको पनि र रमिताको पनि । यो दुवै जनाको कमजाेरी हाे । तर, यो घटनामा आस्थालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने परिस्थिति बनाएको विषय भने आश्चर्यजनक छ । यो प्रहरीको अप्राकृतिक अभ्यास हो ।
आस्थालाई पक्रन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको अनुमति दिनु नै हास्यास्पद छ । न उनले वर्षौंदेखि उखु किसानको भुक्तानी नगरेकी हुन्, न त ठेक्का लिएर वर्षौंदेखि सडक पुलको काम अलपत्र पारेर सयाैं सर्वसाधारणलाई सकड दुर्घटनामा मर्न बाध्य बनाएकी नै हुन् ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्ते गर्नमा न उनी संलग्न छिन्, न त गोकर्ण रिसाेर्ट र दरबारमार्गको जग्गा २५ वर्षका लागि किर्ते गर्नेमध्येकी हुन् । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने पनि उनी होइनन्, सामाजिक अभियन्ता दिलीपकुमारको छातीमा टिपर चलाउने टिपरचालक पनि होइनन् आस्था राउत । गरिबको घरखेत कब्जा गर्दै उठिबास लगाउने र लालाबालासहित त्रिशूलीमा हामफाल्न बाध्य गराउने मिटरब्याजी पनि होइनन् उनी । तर अदालतले यति हतारिएर पक्राउ अनुमति दियो कि मानौं, उनी ‘३३ किलो सुनकाण्ड’की योजनाकार हुन् ।
विमानस्थलमा उनले अपमान खेपेपछि विद्रोहस्वरुप उनले मुलुकको सिष्टमप्रति आक्रोश ओकलेकी हुन् । ‘रिसको बेलामा कसैले वेद पढ्दैन’ भनेझैं दुई/चार वाक्य अशिष्ट थियो होला् अस्थाको पनि र रमिताको पनि । यो दुवै जनाको मानवीय कमजोरीको उपज हो । तर, यो घटनामा आस्थालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने परिस्थिति बनाएको विषय भने आश्चर्यजनक छ । यो प्रहरीको अप्राकृतिक अभ्यास हो । यो खतरनाक मात्र छैन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठाडो चुनौती हो । यसले आउँदा दिनमा प्रहरी र समाजको सम्बन्ध झन् खराब गराउने देखाउँछ ।
माफी मागिसकेपछि पनि कारबाही किन ?
आस्थाबाट केही गल्ती भएकै हो, उनी स्वयमले यो कुरा स्वीकार गरेकी छन् । आवेगमा बोलेको शब्दप्रति उनले रुँदै माफी मागेकी छिन् । ‘मेरो आवाज दुर्व्यवहारविरूद्ध हो, प्रहरी आर्मी वा प्रशासनविरूद्ध होइन,’आस्था राउतले भनेकी छन् । केही कानुनविद्ले यो घटनालाई ‘एटिच्युड प्रब्लम’ ले निम्त्याएको परिणाम भएको र ‘क्रिमिनल केस’का रुपमा डिल गर्न नमिल्ने बताएका छन् । माफी मागिसकेपछि पनि पुरानो भिडियोकै आधारमा आस्था राउतमाथि मुद्दा चलाइन्छ र कारबाही हुन्छ भने विचार गरौं, सूचना प्रविधि विधेयकका कारण हाम्रो हालत के होला, जो सामाजिक सञ्जालमार्फत विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारप्रति खेद प्रकट गरिरहेका हुन्छौं ।
कलाकार नै किन आस्थाको विपक्षमा ?
र्‍यापर भिटेनले अस्लीलता फैलाउँदा समर्थन गर्ने, दुर्गेश थापाले गीतबाटै विकृति भित्र्याउँदा समर्थन गर्ने कलाकारहरू अहिले आस्थालाई अप्ठेरो पर्दा किन काखी बजाइरहेका छन् ? मलाई अचम्म लाग्छ । कलाकारहरूको यस्तो पूर्वाग्रहबाट बुझ्न सकिन्छ, आस्था राउतकोे लोकप्रियताप्रति धेरै कलाकारलाई डाहा भएको छ ।
आस्थाको आक्रोश प्रहरी होइन, प्रवृत्तिविरुद्ध
देशमा शासन प्रणाली अस्तव्यस्त छ । नेताको रजाइँ, भष्टाचारले देश कुहिन लागेको छ । ऐन कानुनको पालना गर्न खटिएका राज्यका प्रतिनिधि प्रहरीको दादागिरी उस्तै छ । यस अवस्थामा आस्था राउत वा उनीजस्तै धेरै नागरिक रिसाउनु मुलुकको सिष्टमकै कारण हो । प्रहरीका विशेष गरी तल्लाे दर्जाका कर्मचारीमा सोमत (सभ्यता) छैन । सर्वसाधारणका अगाडि उनीहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि सम्झन्छन् । सर्वसाधारणलाई जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । यो कुरा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू आफैं स्वीकार्छन् । यही कारणले पीडित सर्वसाधारणलाई राहत महसुस गराउनकै लागि प्रहरी मेरो साथी, समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम प्रहरीले नै चलाइरहेको छ ।
आस्थाको बयानसँगै विवाद चर्केपछि प्रहरीले संवेदनशील स्थानको सीसीटीभी भिडियो नै सार्वजनिक गरेको छ । यसमाथि पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । चेकिङमा राखिएको सीसीटीभी फुटेज भनेको अनुसन्धानका लागि हो, सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि होइन । होइन भने यसअघि सुन तस्करीका भिडियो पनि यसैगरी सार्वजनिक किन गरिएन ? विमानस्थलबाटै दर्जनौं गम्भीर प्रकृतिका अपराध भएका छन्, खोइ फुटेज सार्वजनिक भएको ? प्रहरीले आफ्नो संस्थागत आचरण सुधार्ने मौकाका रूपमा यो घटनालाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ भने कलाकारले पनि बोल्ने शैली सुधार्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ६, २०७६, ०२:१३:००